Qasaaraha ka Dhashay Qaraxii Muqdisho Oo Sii Kordhaya. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Muqdisho(FMN)—Waxaa sii kordhaya qasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxii gabal-dhicii shalay lala beegsaday Huteelada naasahablood 2 iyo Central ee ku yaala Badhtamaha Magaalada Muqdisho,kaas oo loo adeegsaday gaadhi weyn oo walxaha qarxa lagusoo shixnaday,kadina dableey hubeysan oo saarnaa gaadhi yar oo daba socday,ay gudaha ugaleen Huteelka Naasahablood 2.
Dableyda gudaha ugashay Huteelka Naasahablood 2 oo tiradooda lagu qiyaasay 7 nin ayaa markiiba bilaabay rasaas ay la beegsanayaan dadkii ku jiray gudaha Huteelka,iyaga oo qolalkana mid mid ubaadhayay.Qaar kamid ah dablayda ayaa sidoo kale la xaqiijiyay in ay isku qarxiyeen Huteelka gudahiiisa.halka kuwa kalena ay adeegsanayeen bam-gacmeedyo iyo qoryaha daran-dooriga udhaca.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimmatay,tiro aan si rasmi ah loo shaacinina waa ay ku dhaawacmeen,dadkaas oo isugu jiray shacabkii goobta ka agdhawaa iyo dadkii ku jiray gudaha huteelka.
Wararkii udanbeeyay ayaa sheegaya in weerarkaasi lasoo afjaray,iyada oo lagu guulaystay in lasoo daad-gureeyo dadkii ku go’doonsanaa gudaha huteelka intoodii ka bad-baadiyay rasaastii iyo bam-baanooyinkii ay adeegsanayeen dablaydii la wareegtay gacan ku haynta huteelka.
Dadka la xaqiijiyay in ay halkaasi ku geeriyoodeen waxaa kamid ah;Madax iyo saraakiil sar-sare oo ka tirsan DFS iyo Maamul-goboleedyada dalka.Ilaa iyo hadda waxaa la hubaa dhimashada Mas’uuliyiin uu kamid yahay;Maddoobe Nuunoow oo hore usoo noqday Wasiirka War-faafinta ee Soomaaliya,haatanna ka tirsanaa maamulka Koon-fur galbeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane;Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay qaraxaasi waxuuna yidhi:,“ Innaa Lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxa aan Alle uga baryayaa in uu Janadiisa ku manaysto, dadkii Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee lagu laayey weerarkaan. Intii dhaawacanta iyagana waxa aan ugu ducaynaynaa in Alle uu siiyo caafimaad deg-deg ah.”
Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii uu isla Magaalada Muqdisho kadhacay qarax tan weyn oo ay ku halaagsameen ku dhawaad 400 oo qof.Halka tiro intaas kabadana ay ku dhaawacmeen
Previous Previous post: Qaraxyo Mattaano ah oo Goor Dhaw Muqdisho ka dhacay.
Next Next post: Xildhibaan;Faarax Sheekh Cabdulqaadir Oo Ka Tacsiyadeeyay Qaraxii Shalay Muqdisho Ka Dhacay.